Nharaunda Dhiyabhorosi | FXCC
musha / Trading / Forex Tools / Interest Interest
Nheyo dzekudyidzana kwehuwandu pakati pemabhanki dzinogona kuva nechinetso chakakosha pamabasa edu ekutengeserana. Mune tafura iyi takapa rondedzero yakazara yezvitsva zvese zvakakosha, zvine chokuita nemabhengi ose epasi rose.
Kudai chiyero chekushandurwa chichaziviswa, somuenzaniso, chero ipi zvayo inonyanya mabhizimusi makuru: EECB, Bank Of Japan, Fed uye UK yeBhange yeEngland, zvino kugadzirisa kunogona kuita zvinoshamisa kushanda kweparadhesi mbiri.
muenzaniso: Ngatitaurire kuti Fed inoratidza kuti 0.25% inokwira muUnited States chiyero, saka inoretically dollar ichakwira kune yakakosha uye vazhinji vezera ravo vaduku. Vashandi vachadzoka kudhora sezvo inotongwa kuti iri kupa mutengo wakanaka wekutsvaga mari.
Nemazwi akajeka, kana uri kungogamuchira 0.5% inofanirwa mune rekodha rekuchengetedza, ipapo kuisa mari muma dollar, muI.SA yakachengetwa motokari yekuchengetedza motori ne 0.75% yezinga, inonzwisisika kuva yakakosha uye inogona kuratidza kuti inowedzera mari .
Panewo zvimwe zvakanakira maererano nehutano hwemabhanki makuru, somuenzaniso, mukana wekushandisa izvo zvinonzi "kutakura mikana yekutengesa".
Acurrency inotakura mutengesi isarudzo inoshandiswa nemurimi wekutengesa imwe mari, uye inowanikwa pasi pekuda kwekuda uye anoshandisa mari yekutenga mari yakasiyana, iyo inobhadhara chikwata chapamusoro. Mumwe mutengesi anoshandisa nzira iyi inoedza kutora musiyano pakati pemitengo. Iyi goro inogona kuve yakawanda, zvichienderana nehuwandu hwehuwandu hunoshandiswa. Isu tinopupurira mienzaniso yakajeka yekutakura kutengesa munzvimbo yedu ye forex market nguva dzose; kana tikafunga kuti dhora richakwirirana ne euro, saka isu tichatsvitsa EUR / USD.
Pasinei nekuwana kwenguva pfupi inogona kuwanikwa sepakati pebhangi kudiwa kwekugadziriswa kunoshandiswa kunoshandiswa, iyo nguva yakareba inowanikwa, nevashambadzi vanowanzoonekwa se "vatengesi vekutengesa", kana "vatengesi vepamusoro" vane hanya zvikuru nehuwandu hwekuda kwehuwandu zvisarudzo nepamabhanki makuru. Iko rudzi rwevatengesi vezvenyanzvi vanogona kungodzokorora kana kuchengetedza nzvimbo dzavo dzekugara kwenguva refu mumari dzakasiyana-siyana pairi, maererano nehuwandu hwekuda kuchinja. Vanogona kuisa mashoma mashizha pagore, uye kungoita zvekutengesa apo bhenji guru rinoshandura mutengo wayo.
Tora Central Bank Nhamba Dhidha